‘पठाओ’को सेवा कानुनसम्मत, सरकारले तोकेको दररेटमा छिटोछरितो सेवा दिएको दाबी
२८ श्रावण २०७६, मंगलवार १७:२२
काठमाडौं । पठाओ नेपाल प्रा.लि.ले आफ्नो सेवाको सम्बन्धमा आइरहेका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काठमाडौंमा मंगलबार पठाओले पत्रकार सम्मेलन गरी गएको शुक्रबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको ‘कार लाइट’सेवाकोबारेमा प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
पठाओले विगत एक वर्षदेखि कानुन बमोजिम दर्ता र स्वीकृत लिई सस्तो, सुलभ र छिटो छरितो यातायात सेवा दिइरहेको पठाओ नेपालका क्षेत्रीय निर्देशक असिम मान सिंह बस्नेतले जानकारी दिए । कानुनको अधिनमा रही पठाओको एप मार्फत मोटर साइकल र कारबाट यातायात सेवा दिइरहेको भन्दै उनले पठाओको सम्बन्धमा आएका भ्रामक समाचारको विश्वास नगर्न आम जनता र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेका छन् ।
गएको शुक्रबारबाट सुरु भएको कार लाइट सेवाबाट लिएको भाडाका सम्बन्धमा भ्रम देखिएकाले यसलाई चिर्न आवश्यक ठानेको पठाओले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पठाओकाअनुसार सरकारले तोकेको भाडादर अनुसार नै लिइरहेको छ ।
ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् तोलामा कति पुग्यो ?
बिदेशी मुद्रा साट्नु छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको बिनिमयदर